MinerOS GNU / Linux: Rafitra miasa ho an'ny fitrandrahana nomerika (MilagrOS) | Avy amin'ny Linux
Linux Post Install | | Fitsinjarana, GNU / Linux
Saludos, miembros y visitantes de este grandioso y extenso Blog de alcance internacional sobre Software Libre y GNU/Linux. Rehefa afaka volana maro tsy nanoratako toy izao, anio dia mitondra famoahana momba ny fivoarako vaovao ao amin'ny Free Software World aho, izay manambatra izay rehetra nianarako hatreto GNU / Linux, Internet (Webapps) ary Digital Cryptocurrency Mining:
0.1 Mpitrandraka GNU / Linux: Rafitra miasa 100% vonona amin'ny fitrandrahana Cryptocurrency Digital
1 Inona ny MinerOS GNU / Linux?
1.1 Kinova miorina amin'ny ho avy
1.1.1 Fampahalalana lehibe nohavaozina tamin'ny 11/07/2018
1.2 MilagrOS - kinova vaovao vaovao
1.2.1 Fampahalalana lehibe nohavaozina tamin'ny 30/07/2021
Mpitrandraka GNU / Linux: Rafitra miasa 100% vonona amin'ny fitrandrahana Cryptocurrency Digital
Inona ny MinerOS GNU / Linux?
Izany dia GNU / Linux Distro, izay eo an-dàlam-pamolavolana ary azo alaina amin'ny kinova beta (0.2) sy ny fanomezana teo aloha (fandraisana anjara amin'ilay tetikasa) ao amin'ny kininy beta 0.3.
Na izany aza, antenaina fa ny kinova miorina voalohany, izany hoe ny Dikan 1.0 (Petro) an'ny Mpitrandraka GNU / Linux azo ampiasaina ho Distrika fampiasana isan'andro, satria mitondra ny Rindrambaiko fototra sy tena ilaina amin'ny trano sy birao, amin'ny fikirakirana mifototra amin'ny Ubuntu 18.04 (Modernity sy high Compatibility) sy MX Linux 17 miorina amin'ny DEBIAN (Stability, Portability and high Customization) ao anaty fiarahan'ny XFCE Environment (Light and Functional) + Plasma (Beautiful and Robust), noho izany izy dia mampifanaraka tanteraka amin'ny PC (Solosaina Manokana) ambany salantsalany na avo lenta nefa tsy misy olana.
Kinova miorina amin'ny ho avy
La Dikan 1.0 de Mpitrandraka GNU / Linux dia ho avy mifototra amin'ny Ubuntu 18.04 ary milanja izany 1 GB miampy (4.3 GB) izany Dikan 0.3 noho ny Tontolo iainana Plasma manokana miaraka amina fampiharana teratany maro kokoa, fa handany memo RAM kely kokoa, 400MB eo ho eo raha oharina amin'ny 640MB an'ny Version 0.3. Manomboka hatreto amin'ny manager session fidirana (lightdm) amin'ny antsalany ao anaty 30 segondra ary manidy tanteraka eo ho eo afaka 10 segondra. Miaraka amin'ny rindrambaiko nomerika miisa 5 sy Wallet 6 napetraka.
Ny Distro MinerOS GNU / Linux Version Antenaina hapetraka manomboka 19 aprily 2.018, na aorian'ny famoahana amin'ny fomba ofisialy ny Ubuntu 18.04. MinerOS GNU / Linux 1.0 hitondra ny programa momba ny harena ankibon'ny tany Minergate, CGMiner, CPUMiner, Claymore ary XMR-STAK-CPU, más las Billeteras de Armory, Exodus, Jaxx, Magi, y el complemento de detección de Billeteras de Hardware Trezor instalada por defecto.
Raha fintinina, MinerOS GNU / Linux Is a Rafitra miasa "Tsy miankina" sy "100%" vonona hampiasaina amin'ny Trano, birao ary / na Cryptocurrency Mining. Ary azo ovaina mora foana ho lasa Gamer Linux mifanentana amin'ireo rindranasan'ny Microsoft tompony amin'ny alàlan'ny fametrahana PlayOnLinux sy Steam.
Fampahalalana lehibe nohavaozina tamin'ny 11/07/2018
Navoaka MinerOS kinova 1.1 ary tapaka ny hevitra fa hamita tanteraka ny fivoarany. Ka ato ho ato dia hifindra any amin'ny Distro vaovao antsoina hoe MilagrOS ny zava-drehetra novolavolaina teo.
MilagrOS - kinova vaovao vaovao
Fampahalalana lehibe nohavaozina tamin'ny 30/07/2021
Nanomboka tamin'ny Jolay 2.019, ny Distro MinerOS taloha miankina amin'ny Ubuntu 18.04, tsy nohavaozina bebe kokoa, na izany aza, nifindra tany amin'ny vaovao Distro MilagrOS, miankina amin'ny MX Linux 19.X, izay mifototra amin'ny DEBIANI 10.X, vokatr'izany, raha te hahalala bebe kokoa momba an'io Distro mety amin'ny Fitrandrahana nomerika, solo deben visitar la web oficial de la misma en el Tetikasa Tic Tac | Distros.
"Fahagagana GNU / Linux, dia fanontana tsy ofisialy (Respin) an'ny MX-Linux Distro. Izay miaraka amina fanamboarana sy fanatsarana faran'izay mafy, izay mahatonga azy io ho tonga lafatra amin'ny solosaina ambany na loharano taloha, ary ho an'ireo mpampiasa tsy manana na manana fetra Internet voafetra sy fahalalana momba ny GNU / Linux. Raha vantany vao azo (alaina) ary apetraka, dia azo ampiasaina amin'ny fomba mahomby sy tsy misy ilàna Internet, satria izay rehetra ilainao sy bebe kokoa dia efa napetraka mialoha".
También pueden ver más información reciente dentro de nuestra web en el siguiente rohy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » MinerOS GNU / Linux: Rafitra fiasa ho an'ny fitrandrahana nomerika (MilagrOS)
MANUEL ARTURO SILVA ROCHA dia hoy izy:
he! tsara post 🙂.
Valiny amin'i MANUEL ARTURO SILVA ROCHA
Misaotra anao! Napetrako tao amin'io Distro io ny fahalalako rehetra!
Salama Jose, salama maraina
Azoko tsara fa distro vaovao izy ary ny fanontaniako dia: Manohana ny fametrahana programa toa ny postgres, docker, postman, mysql, sns sns ve io distro vaovao io sa ho an'ny programa an-trano fotsiny (birao malalaka)?
Anonyme, mazava ho azy. Manohana ny sehatra fandaharana GNU / Linux fototra rehetra!
cloudbox dia hoy izy:
«Ny anaran'ny kaody an'ny Distro MinerOS GNU / Linux Version 1.0 dia ho" Petro "ho fanomezam-boninahitra ny Cryptocurrency voalohany na Cryptoactive ofisialin'ny Repoblika Bolivarian'i Venezoela». Mampalahelo fa nampiditra ny politika (fa tsy ny tsara indrindra) amin'ny OS linux ianao.
Valiny amin'ny cloudbox
Mazava ho azy fa mampalahelo ny mahita an'io anarana io ho zavatra politika! Ny Version 1.2 dia hatao hoe Onixcoin, ny 0.3 dia hatao hoe Bolivarcoin ary ity manaraka ity dia hantsoina ho Cryptocurrency Nasionaly miankina na governemanta Cryptocurrency noforonina avy amin'ny sehatra tsy miankina nasionaly na ny fanjakana Venezoeliana (Governemanta), na inona na inona antoko na fotopampianarana mibaiko azy! Ka noho izany dia tsy Petro no antsoina hoe zavatra politika, Petro no antsoina hoe zavatra lojika sy marketing! Raha manintona Crypto i Capriles, Machado, Mendoza na iray hafa amin'ny firenena mpanohitra, dia azo antoka fa ny sasany amin'ny ho avy 1.X dia hantsoina hoe. Tsy mpanao politika aho fa teknolojia!
Andriamatoa Teknolojia tsy te hanao politika:
Izay rehetra misy ny marika "Venezoela" dia tsy azo itokisana, tsy cryptocurrency, tsy fizarana linux. Fantatr'izao tontolo izao ny zava-mitranga ao Venezoela.
Ary rahoviana ... fizarana linux iray hafa ... izay manolotra zavatra mitovy azonao atao amin'ny fizaranao linux miaraka amina baiko roa ao amin'ny console. Tsy miteny.
Tsy mividy aho. Misaotra anao.
Izy io dia manana izay rehetra mety hamitaka.
Fomba mahaliana sy hajaina! Andao hojerentsika raha azoko: Tsy misy atokisana izay misy ifandraisany amin'i Venezoela na any Venezoela? Andao lazaina, amin'ny fiheverana nolavina, fa marina tanteraka izany ary tsy azo ivalozana, ary noho izany dia marina tanteraka ianao. Saingy rehefa manana izany ianao dia mandà ny tenanao ho toy ny olona misaina, nivoatra mandroso, satria ianao dia, na mampiasa an'ity bilaogy rindrambaiko maimaim-poana sy tsara tarehy Venezoeliana ity. Ary raha ny fahalalako azy, ny Venezoeliana (Rehetra: Ofisialy sy mpanohitra, sosialista sy kapitalista, havanana sy havanana) dia mitovy, tsara sy ratsy, toy ny olona hafa rehetra. Na izany na tsy izany, rehefa mivoatra ianao dia miresaka izahay. Miarahaba sy mikarakara ny mamy ...
Mifona arivo amin'ny fanehoan-kevitra nataoko teo aloha. Manala ny zavatra nolazaiko tamim-kenatra aho.
Venezoela mahafinaritra i Venezoela, amin'ny firenena mahafinaritra, ary tena miavaka tokoa izy noho ny faniriany hanatsara ny tenany, na dia, amin'ny fahitako azy ambany dia tsy miaraka aminy ny governemanta.
Tsaroako koa fa nanala baraka ny asany aho. Fantatro tsara fa tsy maintsy nandany ora maro tamin'io izy, ary ny fotoana no zavatra sarobidy indrindra ananantsika.
Indraindray, amin'ny andro ratsy dia misy ny lesoka, toy ny fanehoan-kevitra mahamenatra ahy. Mifona aminao aho ary misaotra anao noho ny namindranao fo tamin'ny fivoarako faran'izay ratsy.
Ankasitrahako ny fandraisanao anjara amin'ny vondron'olona rindrambaiko maimaimpoana.
Nekena ny fialan-tsininao, ary ho ela velona Rindrambaiko Maimaim-poana!
Salama José, salama maraina. Ny tanjoko dia tsy ny hamorona tirade. Afa-tsy nametraka feo ny anarana nofidinao na inona na inona novolavolanao na noforoninao, na tsara na ratsy. Tsy fantatro manokana ireo distros miorina amin'ny Linux izay miresaka momba ny firenena na ny toe-draharaha politika. Na ny Nova OS aza, distro noforonina tany Kiobà ary hatramin'izao dia tsy tafiditra tao amin'ny tontolon'ny OS, na Canaima, izay miresaka lova voajanahary ao Venezoela. Fepetrako manokana ihany io. Ah, tsy mpanao politika koa aho ary na dia tsy developer aza dia teknolojia ihany koa.
Ireo anarana manan-danja ao amin'ny Distro MinerOS dia tsy hiresaka afa-tsy ny fanjakana cryptocurrency na Venezuelan manokana, satria Distro Venezoeliana mifantoka amin'ny Digital Mining, izay noforonina tany Venezoela! Tsy mahita na inona na inona politika aho amin'izany, fa manaja ny fomba fijerinao aho, izay misy dikany raha misy tetikasa iray avy any amin'ny firenena tafiditra ao anatin'ny fari-pitsipiky ny fambara.
Cloudbox, tsy hitako ilay fihetsika heverina ho "politika" amin'ny fiantsoana anarana codename distro.
Marina izany, tsy mino aho fa mendrika an'io voninahitra io ny mpanao didy jadona Venezoeliana Maduro.
Tetikasa tsy mampino! Hampidiriko ny distro hanandramana azy. Ho tohanana amin'ny ho avy ve ny tetikasa amin'ny sehatra toa an'i Github?
Amin'izao fotoana izao ao amin'ny Blog dia misy ny 0.2 maimaim-poana tanteraka ary ny 0.3 azo alaina aorian'ny fanomezana ho an'ny tetikasa famoronana!
Toa mahaliana izany. Hihaino tsara aho rehefa mamoaka azy ireo
Misaotra tamin'ny pikantsary sy ny famerenana
Imrahil dia hoy izy:
Hifantoka amin'ny fitrandrahana Bitcoin na cryptocurrency ve ity distro ity? Misaotra mialoha, toa tsara
Mamaly an'i Imrahil
Ny cryptocurrency rehetra dia azo zahana amin'ity GNU / Linux Distro ity raha mbola azo atao ny manangona azy ao amin'ny Distros miorina amin'ny Ubuntu / DEBIAN.
Cabin Darwin dia hoy izy:
Ry José malala avy amin'ny Cry & to CA Corporation, orinasa mpanolotsaina fanombohana ao Blockchain sy Cryptoactive Regisitra any Venezoela, te-hifandray aminao izahay hiady hevitra momba ny fomba hanohanana ny fampandrosoana ny MinerOS. Mifandraisa aminay amin'ny alàlan'ny mailaka corpocrypto@gmail.com. Fiarahabana ary fahombiazana bebe kokoa.
Valiny tamin'i Darwin Cabin
Izay rehetra mailako dia: albertccs1976@gmail.com
Ry namako, ny anarako dia be dia be ny sainao, ny tetikasanao ary tena liana amin'izany aho maniry bebe kokoa momba izany, hanana fantsona telegran ianao ahafahako manontany anao momba ilay tetikasa? misaotra mialoha .. ary miakatra VENEZUELA! aza miraharaha ireo hevitra tsy mitombina milaza momba ny firenentsika mahafinaritra .. arahaba
Tena tsara izany. Rehefa vitako dia andramako izany.
Ary fahafinaretana ny maha orinasa Venezoeliana azy (io ihany no hamoaka an'i Venezoela hiala amin'ny tany, tsy miandry mesia).
Ny "Petro" dia anarana kaody fotsiny, raha ny fahalalako azy dia tsy ahy irery izany. Tsy tokony hanao tabataba amin'izany izy ireo ary misy dikany ny fampiasana ny kaody crypto.
Tahaka ny anononanao ny rindrambaiko fitrandrahana ao anatiny dia azonao atao ihany koa ny maneho hevitra momba ny vola crypto azo raisina avy any, izany dia mety ho fampahalalana "hita maso kokoa" ho an'ny olona maro.
Manampy fotsiny aho fa ny taonan'ny daty dia tsy manana mpampisaraka an'arivony.
PS: Nihevitra aho fa sangisangy i Bolivarcoin fa tsy zavatra tena izy.
Misaotra nijery ny daty! Ary ny fiandohana tsy miankina fanjakana Cryptocurrency Community antsoina hoe Bolivarcoin dia antitra noho Onixcoin.
Fanamarihana: Misaotra tamin'ny lahatsoratra. Nanaitra ahy manokana ny "fampifangaroana ny tontolo XFCE + Plasma". Tsy fantatro fa azo afangaro ireo tontolo iainana ireo.
Ny Distro teo aloha, tsy be olona, ​​antsoina hoe XenOS dia tonga miaraka amin'ireo tontolo efa napetraka sy milamina, mifototra amin'ny DEBIAN Testing. Saingy tsy nalaza izy io satria tsy nahavita nampiorina tsara ny fametrahana azy amin'ny alàlan'ny Systemback, saingy tao amin'ny LiveCD dia nahafinaritra izany, ary niaraka tamin'ny Virtualbox efa tafiditra ao anatiny.
Melvin dia hoy izy:
Miarahaba an'i Albert, mpanaraka mahatoky ny bilaoginao Project tic tac, ary ny asanao dia nanontany anao aho indray mandeha fa raha tsy manana oniversite fampianarana rindrambaiko maimaimpoana ianao dia tiako izany, angamba amin'ny ho avy dia azonao atao ny mandray an'io karazana tetikasa io ho mora azo kokoa Izahay izay te handray kilasy linux miaraka aminao ary tsy mila mandoa saram-pianarana tsy miankina, momba ny Mazava ho azy fa tsara ny làlam-bola crypto.
Valiny tamin'i Melvin
Tsy mbola mampianatra amin'ny akademia aho, indrisy. Vao izao aho dia manome ny tolotra matihaniko sy ara-teknika ahy ary torohevitra ao an-trano momba ny Free Software sy Crypto-commerce. Avy any Caracas, Venezoelà aho araka ny fantatrao!
Injenieran'ny tolakandro tsara,
Satria ao amin'ny lahatsoratranao dia manamarika ianao fa maimaim-poana sy maimaim-poana ny iray amin'ireo dikanteniny, tiako ho fantatra hoe aiza no ahitako ny kaody loharano an'ny fizarana, satria te-hijery ny endrika sy fizarana ireo fanaingoana alohan'ny hametrahana ny rafitra aho, tsy misalasala aho ny teniny saingy mieritreritra aho fa tena zava-dehibe ny fananana an'ity fampahalalana ity raha misy fizarana maimaimpoana (GPL) ary manana rindrambaiko izay tsy maintsy alamina tsara mba hisorohana ny famoahana na tetezana tsy ampoizina.
Ny kaody loharano dia ISO ihany, izany hoe, rehefa misintona ny ISO ianao dia afaka mamaha azy ary manova ny rakitra fikirakirany tsirairay. Na amin'ny endrika DVD / USB Live misy azy dia ampandehano izany ary apetraho amin'ny fitsapana ny fifamoivoizana sy ny fanaraha-maso raha toa ka misy na manao karazana fifamoivoizana mandeha ho azy tsy nomen'ny mpampiasa alalana. Ny kaody loharanom-bolan'ny binaries, satria ireo dia mitovy amin'ny Distros Ubuntu 18.04 sy MX Linux 17, satria natambatra ny 2 mba hahatratrarana an'i Distro MinerOS. Manasa anao aho hampidina ny 0.2 mba hahafahanao mizaha toetra azy ary manome hevitra!
Ny olana dia any Uruguay miakatra isan-taona ny jiro
Asa tena tsara
Misaotra anao! Ny sakana lehibe amin'ny fitrandrahana dia ny fanjifana angovo, ka izany no mahatonga ny Distro fihinana maivana sy ambany ary manala ny sasany amin'ny fampiasana angovo fitaovana natokana ho an'ity hetsika ity.
Manohana an'i UEFI?
Amin'ny maha-Ubuntu 18.04 ahy dia heveriko fa manohana azy io, satria i Ubuntu no mifanentana indrindra sy maoderina miaraka amin'ny Windows izay misy ny haavon'ny GNU / Linux.
Miarahaba anao. Distro tena tsara!. Hitako fa manana AnyDesk aza ianao efa napetraka ary miaraka amina fanaingoana sasany. Ny fanontaniako dia hoe havaozina ho 0.2 ny kinova 0.3 na 1.0 raha vao mivoaka? Cheers…
MinerOS, toy ny Distro MX Linux 17 (Distro Mother) amin'ny alàlan'ny installer teratany MX Install dia manohana ny fanavaozana ny Distro amin'ny kinova hafa, na izany aza, amin'ity tranga ity dia tsy azo havaozina amin'ny 0.3 ka hatramin'ny 1.0 izany satria ny Distro hafa Reny (Ubuntu) dia niova tamin'ny 17.04 ho an'ny kinova 0.3 ka hatramin'ny 18.04 ho an'ny kinova 1.0. Noho izany, tena nanolorana tanteraka anao hametraka ny kinova MinerOS 1.0 amin'ny rangotra.
Ary na iza na iza manome ny vola voalaza mba hidirana amin'ny kinova 0.3 dia hahazo ilay rohy fampidinana ho an'ny kinova 1.0 maimaim-poana. Ary na iza na iza manome ny vola voatondro ho an'ny 1.0 dia hahazo ilay vola voatondro ho an'ny kinova 1.1 sy 1.2 maimaim-poana.
Fanamarihana: tsy fandoavam-bola izany, fa fanomezana ho an'ny fampandrosoana ity GNU / Linux Distro vaovao ity izay nandany ora / asa be dia be mba hananganana amin'ny fomba altruistic tanteraka ho tombontsoan'ny rehetra!
Walter Silveira dia hoy izy:
Tonga amin'ny fotoana mety indrindra sy voatondro hananganana harena ankibon'ny tany amin'ny sekoly sy ny oniversite izy io. Maha-rindrambaiko maimaim-poana ary mora manome hery.
Amin'ny maha mpiara-miasa sy mpampianatra oniversite azy dia fitaovana fanombohana tsara izy io
Misaotra tamin'ny fandraisanao anjara Jose Albert, Arahabaina.
Valiny tamin'i Walter Silveira
Misaotra betsaka noho ny firariana soa! Vetivety aho dia manantena ny hamoaka ny kinova 0.3 an'ny MinerOS GNU / Linux maimaim-poana, izay ilay farany miorina amin'ny Ubuntu 17.04. Ary ny fananana ny kinova 1.0 miorina amin'ny Ubuntu 18.04 vonona alaina aorian'ny fanomezana. Ny fahasamihafana misy eo amin'ny 2 amin'ny ankapobeny dia ny kinova Ubuntu izay miasa ho toy ny fototra, ny fanjifana ambany kokoa ny RAM, ary ny fampidirana ireo Wallets. Etsy andanin'izany, nampidiriko ny Wallp Arepacoin, ary nanavao ny Webapps (Menu Bookmarks) tao amin'ny Browsers. Raha aorian'ny 20Feb sy alohan'ny 20Mar dia tsy misy vaovao momba ny Petro Mining Software, dia ampidiriko amin'ny Internet fotsiny ny Wallet na amin'ny lozisialy natombok'izy ireo ary apetrako amin'ny Internet ny Version 1.0 amin'ny aprily. Ary mikasika ny fampiasana azy any amin'ny Oniversite sy Colleges, na toerana hafa izay hiasa ho an'ny Node Federated na ho an'ireo mpampiasa manokana na ara-dalàna, izay maniry hiditra amin'ny Digital Mining nefa tsy misy fahalalana firy satria ity Distro ity dia mety satria efa nampiasaina tao amin'ny Ny format (DVD / USB) dia velona (Live) na apetraka, vonona ny hampiasa tsy toy ny Distro hafa ao anatin'izany ny Ubuntu, izay tsy maintsy apetraka sy hamboarina avy eo am-boalohany, izay mamonjy ora / ora ary mampihena ny fihodinana ianarana hahazoana tombony! Ary farany, manantena aho fa hankafizin'ny rehetra ary hanome izay azony atao mba hahafahako manohy mandroso amin'ny fivoarany, tsikelikely!
Mampiaiky volana, manazava aho fa tsy fantatro fa ity tranonkala narahiko nandritra ny taona maro hatramin'ny fotoana mpamaky google ity, dia Venezoeliana, miarahaba anao aho ary misaotra anao noho ny tranonkala, linux velona lava ary izay hetsika rehetra manalemy ity rafitry ny fanjifana sy orinasa ara-bola, ady an-trano ataon'ny governemanta ity.
Misaotra anao nanaraka ny DesdeLinux!
Tehina Joel dia hoy izy:
Miarahaba anao! Tena fandraisana anjara lehibe tokoa ho an'ny tontolon'ny Free Software sy ny toekarena itsinjaram-pahefana. Manantena aho fa azo trandrahana i Monero amin'ny fizarana, arahaba!
Valiny tamin'i Joel Cañas
Raha tsy izany dia tsy tokony hisy olana amin'izany! Ny tanjona faratampony an'ity Distro ity na ny iray hafa dia ny hampiditra azy ireo ao amin'ny Gamer Consoles (miaraka amin'ny voambolana voavolavolain'izy ireo tsirairay avy) mba hahafahanao mihazona azy io miaraka amin'ny zava-drehetra vonona (napetraka / natambatra) hividianana azy, ohatra, PS3 / PS4 na Nintendo Switch. araka ny hitako androany tao amin'ny lahatsarin'ireo hackers sasany izay nanangona GNU / Linux miaraka amin'ny Plasma amin'ny Nintendo Switch.
21-Feb-18: Ny rindrambaiko Cpuminer-Opt Mining sy ny Wallet NEM dia tafiditra tao amin'ny kinova 1.0 ho avy. Webapps (Web Bookmarks) nohavaozina, ary nampidirina ny fampahalalana nohavaozina momba ny Petro. Ny fototra (apps) an'ny Operating System miorina amin'ny Ubuntu 18.04 (Bionic) dia novaina hatramin'ny 21/02/18.
02-Mar-18: Manararaotra ny zava-misy fa toy ny omaly, ny MinerOS Base, Ubuntu 18.04 LTS "Bionic Beaver", ny kinova LTS manaraka an'ny Ubuntu dia niditra tamin'ny dingana mangatsiaka, izay midika fa tsy misy endri-javatra vaovao hanampy eo alohany ny fanombohana ary ny asa dia hifantoka amin'ny fanitsiana ireo hadisoana efa misy sy fanamorana ny fampifanarahana ireo fonosana samihafa, androany dia nisy sary vaovao an'ny MinerOS GNU / Linux namboarina niaraka taminy! Amin'ity fanavaozana vaovao an'ny GNU / Linux MinerOS Base ity dia ho hitantsika izao ihany koa ny zavatra toy ny: Kernel 4.15, Xorg ho mpizara sary, mpizara sary Wayland misy, GNOME 3.28 Desktop, miaraka amina fonosana sasany toa ny manager file Nautilus mbola ao 3.26, Mozilla Firefox 57.0.4 ary santionany voalohany amin'ny LibreOffice 6.0.1.1. Ary alohan'ny volana aprily, alohan'ny famoahana ofisialy ny Ubuntu 18.04 sy ny MinerOS 1.0, manantena aho fa afaka manampy sy mamela ny Virtualbox 5.2 miasa ao anatin'ny Distro ka amin'ny endrika Live DVD / USB na aorian'ny fametrahana azy dia afaka mitantana sary ISO ho azy izy. mitovy na Distros hafa hanandrana.
Frank Silva dia hoy izy:
Asa miavaka !!
Valiny tamin'i Frank Silva
Amin'izao fotoana izao, aorian'ny fametrahana MinerOS, dia tsy maintsy mamafa ny folder .anydesk (lahatahiry) amin'ny / trano / $ USER miaraka amin'ny baiko: sudo rm -f /home/$USER/.anydesk ka AnyDesk (Rindrambaiko fidirana sy fifehezana Remote) dia voaverina ary azo alamina avy hatrany, satria raha tsy izany dia samy manana solonanarana sy tenimiafina mitovy ny GNU / Linux MinerOS. Ao amin'ny famoahana kinova 1.0 dia hamboarina io! Ary amin'izao fotoana izao ny vaovao tokana dia ny LibreOffice tsy mandeha amin'ny endrika DVD / USB Live (Live) fa rehefa apetraka ny Distro dia miasa lafatra! Manantena koa aho fa hanampy an'i Kodi hanitatra ny fampiasana ny Distro!
Manitsy aho: sudo rm -rf /home/$USER/.anydesk
MinerOS GNU / Linux 1.0: Vita!
Ry Andriamatoa Jose Albert malala, rariny ny manaiky sy miarahaba anao noho ny namoronana ity Distro ity. Tsy azo iadian-kevitra ny fandraisany anjara lehibe tamin'ny fiaraha-monina. Arahabaina mendrika. Te-hametraka fanontaniana vitsivitsy aminao aho: 1. Aiza no ahafahana misintona izany raha vao nomena ny fanomezana natolotray anao? 2. Inona ireo programa momba ny harena ankibon'ny tany tafiditra ao? 3. Tafiditra ao anatin'izany ve ny Miner Dual an'ny Claymore? 4. Manana torolàlana momba ny fametrahana tsikelikely ve ianao? Misaotra betsaka anao mamaly Manorata amiko azafady, te hiara-miasa aminao amin'ny fampandrosoana ity tetikasa ity aho. Miarahaba anao !!
Anontanio ihany koa ny fomba ampiasain'ny MinerOS GNU / Linux 1.0 ho an'ny mpamily motherboard sy GPU samihafa amin'ny fitrandrahana? Misaotra anao
1.- Aorian'ny Fanomezana 0,00010000 BTC ho an'ny Version 0.3 na 0,00030000 BTC ho an'ny Version 1.0 dia andefasako rohy mpamily Google anao mitovy amin'ilay mailaka notondroinao! Mampiasa Eobot Wallets aho handraisana fanomezana!
2.- Ny MinerOS GNU / Linux 1.0 dia hitondra ny programa Minergate, CGMiner, CPUMiner (Version: Multi sy Opt), Claymore (Dual ETH + DCR / SC / LBC / PASC GPU Miner 10.2) ary XMR-STAK-CPU, miampy ny Armory, Bolivarcoin, Exodus, Jaxx, Magi, kitapom-batsy Onixcoin ary ny plugin Detzor Hardware Wallet detection napetraka amin'ny toerana misy anao.
3.- Eny: Claymore (Dual ETH + DCR / SC / LBC / PASC GPU Miner 10.2)
4.- Manana tutorial video fametrahana ianao ato amin'ity publication ity: https://proyectotictac.wordpress.com/2018/03/07/mineros-gnu-linux-1-0-ya-esta-lista/
5.- Manampy anao amin'ny alàlan'ity mailaka ity aho: albertccs1976@gmail.com
Ing. Jose Albert misaotra anao namaly Fanontaniana hafa? Inona ny adiresy BTC anao? Mifandray aminao amin'ny alàlan'ny mailaka ho an'ny fanomezana? Azoko apetraka ao amin'ny Distro ny Claymore's Dual Miner 11.2, izay efa misy? Ireo rohy fampidinana dia GOOGLE: https://drive.google.com/open?id=0B69wv2iqszefdFZUV2toUG5HdlU ary MEGA: https://mega.nz/#F!O4YA2JgD!n2b4iSHQDruEsYUvTQP5_w
Misaotra anao. Salama. Arahabaina
Adiresy LTC: LgcK79zr7zoRP2HqfGrMvdWPKobcdWtqzE
Adiresy BCH: 1QBVdzdQTmEzSc7PEcXmogiqCbbqC274iC
Tagan'ny tanjona: 1286923
Adiresy ZEC: t1eCN7qmsTQQiHgAbVNPYYgYFGPuvQGRUjr
ID fandoavam-bola: 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000001286923
Adiresy MAID: 15easGdbFy4TuwvsmVDwNYZukxRskGodJN
Aorian'ny fanomezana, ny mailaka dia tsy maintsy alefa any amin'ny kaonty mailaka "albertccs1976@gmail.com" miaraka amin'ny Name na Internet Alias, Country and Amount nomena, hanamafisana ny famindrana ary handefa mailaka miaraka amin'ireo rohy fampidinana tsirairay avy.
ENY. Azonao atao ny manavao sy / na manampy ny rindrambaiko fitrandrahana harena ankibon'ny tany rehetra izay tonga ho an'ny Linux ary na Windows aza raha mametraka Playonlinux na Wine ianao!
Raha ny tokony ho izy, minitra farany dia nasiako tamin'ny fiteny espaniola tanteraka ny WPS Office Suite fa raha manokatra amin'ny fomba mivantana an'ny Distro izy mba hanonerana ny tsy fanaon'ny LibreOffice! Ary manana ny KODI Multimedia Center koa izy io izay mamela ny fitantanana atiny multimedia amin'ny Internet na alaina ary milalao lalao video aza amin'ny alàlan'ny fakana tahaka ny ROM-ny.
Ing. Jose Albert rahampitso tolak'andro, fisalasalana hafa ananako:
MinerOS GNU / Linux 1.0 azo havaozina amin'ny repositories Ubuntu ??
Ahoana ny fanohanan'ny MinerOS GNU / Linux 1.0 ho an'ireo mpamily an'ny AMD sy NVIDIA Motherboard sy GPU samihafa amin'ny fitrandrahana?
Raha heverina fa ny Ubuntu 18.04 LTS dia havoaka amin'ny 26 aprily amin'ny endriny farany azo antoka, hisy fanavaozana ny MinerOS GNU / Linux 1.0 ve, aorian'izany? Mbola MinerOS GNU / Linux 1.0 ve sa hanana kinova kely toa ny 1.1 na zavatra toa izany?
MinerOS GNU / Linux 1.0 dia hivoaka andro vitsivitsy aorian'ny famoahana ny Ubuntu 18.04, avy eo mety hivoaka ny 1.1 sy 1.2.
Ie. Ampiasao irery na miaraka ny repositories Ubuntu sy MX Linux 17. Ny fanohanana dia mitovy amin'ny Ubuntu.
Ho an'ireo izay te-hanome sy / na hahazo ny Distro, ireto ny Wallet ho an'ny fanomezana:
16-Mar-18: Hatramin'izao dia misy 7 GNU / Linux 1.0 Mining Operating Systems izay napetraka amin'ny Desktop sy Mobile Computer isan-karazany miaraka amina endrika teknika samihafa amin'ny toerana samihafa (Institutions and Homes) ho an'ny fampiasan'izy ireo manokana (automatisation ofisialy) ary hanombanana ny zava-bitany ho Distro ho an'ny trano sy birao amin'ny ankapobeny. Ny zava-drehetra dia novonoina tamin'ny fomba nahafa-po.
15-Mar-18: ISO farany miaraka amin'ny fampidirana ny Petro Wallet.
14-Mar-18: fanangonana farany ny ISO miaraka amin'ny 4.5GB miaraka amin'ny fahatsiarovan-tena fahatsiarovana RAM 0.4 GB amin'ny fanombohana sy 13 GB ny Disk Space rehefa apetraka, ary maherin'ny 3700 ireo fampiharana efa napetraka. Ny fiheverana ny famaritana ny kinova 1.1 sy 1.2 dia manomboka, izay antenaina hampiditra ireto fanovana manaraka ireto:
a) kinova 1.1: ISO ambony noho 4.7 GB ka tsy ho azo ampiasaina raha tsy amin'ny DVD 8.4 GB Double Layer na USB Storage Storage 8 GB. Ho avy miaraka amin'ny Playonlinux, divay ary Steam efa napetraka izy io. Ary angamba Emulator lalao Console Retro vitsivitsy. Izy io dia hanohana ny fametrahana (mora) ny fametrahana Windows Applications, indrindra ny Lalao.
b) Version 1.2: ISO ambony noho 4.7 GB ka tsy ho azo ampiasaina raha tsy amin'ny DVD 8.4 GB Double Layer na Unitie Storage USB 8 GB. Ho avy io miaraka amin'ny MS Office 2016 efa napetraka. Ho an'ny fampiasana mangarahara, azo ekena ary miorina amin'ny mpampiasa Windows sy MS Office amin'ny GNU / Linux (MinerOS).
Fanamarihana: Na dia MinerOS GNU / Linux 1.0 aza dia 64Bit maritrano, ny kinova 1.1 sy 1.2 dia ho maritrano marobe, izany hoe 32 sy 64 Bit. Ho fanatontoloana lehibe kokoa amin'ny fampiasana azy!
13-Mar-18: Nanomboka nanampy zava-dehibe kokoa ny fizotry ny fanafoanana ireo fampiharana be loatra (tsy ilaina) ao amin'ny Distro, nefa tsy nampitombo ny haben'ny ISO (4.5GB) ankehitriny. Ity dia namela ity manaraka ity hanampy: Alternative Firefox (Version 51.0.1) izay manohana ny plugin web Java (JRE), izay napetraka miaraka amin'ny Sun Java JDK 9.0.4 feno. Izany rehetra izany dia vonona ny Distro amin'ny fanatanterahana programa sy fampiharana an-toerana sy an-tranonkala natao tany Java toy ny Retro Console Emulated Games. Lisitry ny rohy (URL / rohy) misimisy kokoa no nampiana tamin'ny webapps (Menu Browsers Internet Bookmarks) amin'ny emulator, ROMs, sy lalao an-tserasera ary tranokala azo alaina Retro Consoles.
10-Mar-18: nesorina ny custom Conky (Desktop Monitor) namboarina faha-5 nampiana ary nanatsara ny 1st Conky nanampy tamin'ny fampahalalana mitovy sy maro hafa. Hatramin'ny faha-5 Conky dia manome olana fampisehoana sary rehefa manomboka amin'ny fanapahan-kevitra ambany.
08-Mar-18: Ny Office WPS dia nampidirina ho Office Suite fanampiny, amin'ny teny Espaniôla manontolo, miaraka amin'ny rakibolana tsipelina amin'ny teny Espaniôla ary tafiditra ao anatin'izany ny endritsoratra rehetra ary ny LibreOffice dia nohavaozina ho an'ny 6.0.2.1 sy Mozilla Firefox ho kinova 58.0.2, nahatonga ny sary ISO an'ny Distro hiakatra 4.5GB.
07-Mar-18: Manomboka amin'ity andro ity dia ireo fampianarana video vaovao ihany no hatao amin'ny fomba MinerOS GNU / Linux 1.0, mametraka sy miasa, hahafantaran'izy ireo ny Distro amin'ny ankapobeny. Mandra-pamoahana ny Ubuntu 18.04, miaraka amin'ireo fanavaozana farany an'ny MX Linux 17, mamoaka kinova farany sy voafaritra ary sary ISO an'ny MinerOS GNU / Linux 1.0, izay ho azo maimaim-poana tanteraka amin'ny Donors miaraka amin'ny fanomezana 10.000 satoshi ( 0.00010000 BTC) an'ny kinova 0.3 ary amin'ny fandoavana fanomezana 30.000 0.00030000 satoshi (XNUMX BTC) ho an'ny mpamatsy vola vaovao.
06-Mar-18: Kodi (Multimedia Center / Media Center) dia nampiana tao amin'ny Distro MinerOS GNU / Linux 1.0. Azonao atao ny miditra mivantana avy ao amin'ny Multimedia Center na avy amin'ny XFCE sy ny Plasma Desktop Environments, hitantanana Multimedia Resources (Sarimihetsika, horonan-tsary, mozika, feo, sary ary atiny hafa an-tserasera na alaina). Anisan'izany ny mety hisian'ny lalao Retro Console (Atari, SEGA, DreamCast, ankoatry ny hafa). Efa misy ny Repositories an'ny Intrcomp.net, SRP.nu, Fusion.tvaddons.co, Gamestarter ary Zach Morris. Ary ny Internet Archive ROM Launcher add-on (plugins) ankoatry ny hafa. Izay hitombo hanatsara ny fampiasana ny Kodi Multimedia Center.
Miguel Matos dia hoy izy:
Tena tsara, efa manana kinova mivantana an'ny distro voalaza aho hitsapana azy; fa tsy haiko hoe maninona aho no mila mampiditra teny miafin'ny fidirana ary tsy manana izany fampahalalana izany aho vao hiditra. Te hahafantatra aho raha tonga toy izany amin'ny alàlan'ny default, na satria ny fitaovana fanaovana sary kapila dia nampiasaina avy amin'ny kinova napetraka ary tsy notoroana hevitra momba ny teny miafina aho.
Valiny tamin'i Miguel Matos
Francisco Esposito dia hoy izy:
Salama maraina Josefa, miarahaba anao aho amin'ny bilaoginao, karazana fitaovana manao ahoana no atolotra na mendrika izany ho ahy?
Valiny tamin'i Francisco Esposito
Amin'izao fotoana izao, ny mpitrandraka sary sy ny mpitrandraka console izay apetraka dia afaka mitrandraka mora foana amin'ny CPU, fa aorian'ny fametrahana ny mpamily ho an'ny karatra sary tsirairay dia azo antoka fa ho afaka hitrandraka tsy misy olana amin'ny GPU izy ireo.
Version 0.2 - 0.3 - 1.0: Mpampiasa: sysadmin / Password: Sysadmin * 2018 *
Carlos escobar dia hoy izy:
Tena tsara, olona toa ANAO, mazoto ary matoky fa azo atao eo an-toerana ny zavatra. Miarahaba anao aho. Hametraka azy aho ary hanoratra aminao izany.
Valiny tamin'i Carlos Escobar
Misaotra anao tamin'ny fanehoan-kevitrao ary raha tena marina fa hamaha ny manararaotra ny fotoana mety (krizy) ny eo an-toerana.
Androany dia azonao atao ny misintona ny kinova Beta 0.2, 0.3 ary RC1 an'ny Version 1.0 maimaim-poana. Ary ny volavolan-tsoa ho an'ny fanomezana 1.0 azo antoka farany.
Lucio dia hoy izy:
Salama malala, te hizaha toetra ny distro anao aho amin'ny ekipa iray manokana ho azy. Fa manana fanontaniana vitsivitsy aho, afaka mandefa mailaka amiko ve ianao hanoro hevitra anao?
Ny mailako dia kleisinger.lucio@gmail.com
toa mahaliana be ny asanao
misaotra mialoha, arahaba avy any Arzantina
Valiny tamin'i Lucio
Johan linares dia hoy izy:
Fantatrao ve fa ny sehatra fitrandrahana MintMe dia mifanaraka amin'ny Linux? Ka indrindra taorian'ny fanatsarana navoaka tamin'ny kinova 1.2 farany. Eto aho avelako ny rohy hahafahanao mijery ireo fanavaozana rehetra natao https://www.mintme.com/news/release-notes-v1-2
Valiny tamin'i Johan Linares